Tababare Solskjær oo qorsheenaya inuu qaado tallaabo uu horey u qaaday Louis van Gaal – Gool FM
(England) 03 Abriil 2019. Shabakada “Sky Sports” ee dalka England ayaa shaaca ka qaaday in maamulka Manchester United ay iibin doonaan ciyaartoy badan ee ku sugan haatan garoonka Old Trafford, kadib marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo aadan.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in macalinka reer Norway ee Ole Gunnar Solskjær, uu doonayo inuu cusbooneysiiyo dhiiga kooxda Manchester United, taasoo ku xiran in Red Devils ay iska iibiso qaar ka mid ah ciyaartoyda ay haatan heysato.
Manchester United ayaa iibin doonta ugu yaraan LIX ciyaartoy, iyadoo ay maamulka kooxda ay gaareen go’aankan oo kale xagaagii 2015, kadib markii kooxda tabaabre looga dhigay Louis van Gaal, waxaana ka tagay ciyaartoy badan, oo ay ku jiraan Ángel Di María, Robin van Persie, iyo Javier Hernandez “Chicharito”.
Shabakada “Sky Sports” ee dalka England ayaa sidoo kale sheegtay in ilaa iyo haatan ay jiraan LIX ciyaartooy ee ka tagi karta safka kooxda Manchester United, waxaana ugu horeeya xidiga khadka dhexe reer Spain ee Ander Herrera, kaasoo la sii sheegay in heshiis hordhac ah uu la gaaray Paris Saint-Germain si uu ugu dhaqaaqo kadib marka uu furmo suuqa xagaaga ee soo aadan.
Marka laga soo tago Ander Herrera, waxaa sidoo kale jira Juan Mata, oo dib ugu laaban doona horyaalka Spain, sidoo kale waxaa ka mid ah ciyaartoyda kale Alexis Sanchez, Matteo Darmian, Marcos Rojo, iyo Antonio Valencia.